Banky Koreana Airlines amin'ny Dreamliners Boeing 787
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Banky Koreana Airlines amin'ny Dreamliners Boeing 787
Ny Korean Air and Air Lease Corporation dia nanambara androany tao amin'ny Paris Air Show ny drafitry ny zotram-piaramanidina hanampy 30 fiaramanidina Boeing Dreamliner vaovao 787 ho an'ny fiaramanidiny, miaraka amin'ny fanoloran-tena hividy 10-787 10 vaovao sy 10 fiaramanidina 787-9 fanampiny mitentina $ 6.3 miliara amin'ny ny vidin'ny lisitra ankehitriny. Ao anatin'ny fifanarahana ity dia hanofa 10 787-10 avy amin'ny ALC ihany koa ny Korean Air.
Ny zotram-piaramanidina, iray amin'ireo mpitatitra entana lehibe indrindra any Azia miaraka amina làlana tsy miato 16 mankany Amerika Avaratra, dia hampiditra ny 787-10 lehibe kokoa hamenoana ireo fiaramanidin'ny fiaramanidina lava 787-9 sy 777. Ity baiko ity dia ho hita taratra ao amin'ny tranokalan'i Boeing's Orders and Deliveries rehefa vita izany.
"Rehefa manohy manavao ny fanatontosana ny vokatra izahay, ny fianakaviana 787 Dreamliner dia ho lasa hazondamosin'ny fiaramanidina lavitra antsika mandritra ny taona maro," hoy i Walter Cho, Filohan'ny Korean Air. "Ho fanampin'ny 25 isan-jato fanatsarana ny fahombiazan'ny solika, ny mihinjitra 787-10 dia manome toerana 15 isan-jato ho an'ny mpandeha sy ny entana mihoatra ny 787-9s antsika, izay ho zava-dehibe amin'ny tanjon'ny orinasa maharitra."
Amin'ity baiko ity dia hampiakatra avo efatra heny ny fiaramanidiny Koreana ho an'ny fiaramanidina 787 ny mpitatitra saina any Korea satria toa manamafy ny andian-tafika lavitra azy io.
"ALC dia faly sy nomem-boninahitra hitondra ny 787-10 ho an'ny fiaramanidina Koreana Air amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'i Boeing. Ny 787-10 dia manome fampisondrotana fidiram-bola lehibe hamenoana ny fiaramanidina Koreana 787-9, ary ny fampanofana maharitra 787-10 an'ny ALC dia hanitatra be ny sehatra sy hahatratra ny 787-10 amin'ny tamba-jotra eran-tany an'ny Korean Air, "hoy i John L. Plueger, CEO ary filohan'ny Air Lease Corporation.
Ny 787-10 no mpikambana lehibe indrindra amin'ny fianakavian'i Dreamliner mahomby sy mahomby amin'ny mpandeha. Amin'ny halavirana 224 metatra (68 metatra), ny 787-10 dia afaka manompo mpandeha 330 amin'ny fanamboarana kilasy roa mahazatra, manodidina ny 40 mihoatra ny fiaramanidina Koreana Air misy 787-9. Powered by andiana teknolojia vaovao sy famolavolana revolisionera, ny 787-10 dia mametraka fari-pahaizana vaovao momba ny fahombiazan'ny solika sy ny toekarena miasa raha niditra ny serivisy ara-barotra tamin'ny taona lasa. Ny fiaramanidina dia mamela ny mpandraharaha hahatratra 25 isan-jato ny fahombiazan'ny solika isaky ny seza raha oharina amin'ireo fiaramanidina teo aloha.
“Ny fanambarana androany dia mampiseho ny tanjaky ny fiarahamiasa maharitra miaraka amin'ny Korean Air. Ny zotram-piaramanidina dia mpisava lalana ao amin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina fiaramanidina any Azia tao anatin'ny dimy taona lasa ary manana voninahitra lehibe i Boeing amin'ny fahombiazan'izy ireo mitohy, ”hoy i Kevin McAllister, filoha sady manampahefana ambony, Boeing Commercial Airplanes.
Korea Air dia miasa amina fiaramanidin'ny mpandeha 96 any Boeing, ao anatin'izany ny fiaramanidina Next-Generation 737, 747, 777 ary 787. Ny zotram-piaramanidina koa dia miasa fiaramanidina mpitatitra entana rehetra ao Boeing miaraka amin'ireo mpitatitra entana 747-400, 747-8 ary 777.
“Korean Air dia zotram-piaramanidina mitarika indrindra ary lasa iray amin'ireo mpitatitra entana lehibe indrindra any Azia. Voninahitra ho anay fa nanapa-kevitra ny hampiakatra avo efatra heny ny fiaramanidina Dreamliner Koreana Air Korea ary hiara-hiasa amin'izy ireo amin'izy ireo izahay hamita ity fifanarahana lehibe ity, "hoy i Ihssane Mounir, filoha lefitra zon'ny Sales Sales and Marketing an'ny The Boeing Company. "Korea Air dia manohy manangana andian-tsambo fiaramanidina tsy mampino hahafahany manome ny filozofia manome 'Excellence in Flight' ho an'ireo mpandeha ao aminy.”
Ny Korean Air dia mampiasa karazana Boeing Global Services hanohanana ny andian-tsambony, ao anatin'izany ny serivisy fitantanana Airplane Health Management, izay manatsara ny fandaharam-potoanan'ny fiaramanidina amin'ny alàlan'ny fanadihadiana mialoha miaraka amin'ny angon-drakitra momba ny sidina amin'ny fotoana maharitra mba hampihenana ny fahatarana ho an'ny fiaramanidina 787. Mampiasa ny serivisy fitaterana sidina elektronika Jeppesen FliteDeck Pro ihany koa ny zotram-piaramanidina izay manatsara ny fidirana amin'ny angon-drakitra fitaterana nomerika, tabilao, boky torolàlana ary fampahalalana momba ny toetr'andro ho an'ny mpanamory fiaramanidina. Ho fanampin'izany, Korean Air dia mampiasa drafitra fandaminana sidina dizitaly sy vahaolana amin'ny famakafakana runway, mba hanatsarana bebe kokoa ny fahombiazan'ny asa sy hampihenana ny vidiny amin'ny dingana rehetra amin'ny sidina.
Ny Korean Air koa dia nisafidy ny motera GEnx hampandeha ireo Dreamliners 30 Boeing 787 fanampiny. Io fisafidianana io dia hampiakatra ny fiaramanidina Dreamliner ampiasain'ny GEnx Koreana ho fiaramanidina 40.
Ny Korean Air's Aerospace Division dia mpiara-miombon'antoka Boeing lehibe amin'ny programa 747-8 sy 787, manome ny tendron'ny elatra misy elatra miavaka isaky ny maodely. Ny fizarana koa dia mpamatsy ny Winglet 737 MAX Advanced Technology (AT) vaovao.
Miaraka amin'ny fiaramanidina 168, ny Korean Air dia iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka 20 manerantany ary manompo 126 any amin'ny firenena 44 manerantany. Mpikambana mpanorina ny alliance SkyTeam izy ary nanangana fiaraha-miasa Joint Venture miaraka amin'ny Delta Air Lines.
Saodiana Saudi Arabia Airlines hampisondrotra ny fiaramanidina A320neo Family hatramin'ny 100